स्वास्थ्य – mero sathi tv
१७ बैशाख २०७५, सोमबार १६:१२ April 30, 2018
LeaveaComment on कालोपोतो र डन्डीफोर हटाउने घरेलु उपायहरू आलु देखि ल्वाङसम्म
डन्डीफोर र कालोपोतोले अनुहार कुरुप बनाएको हुन्छ । अनुहारमा देखिने प्रमुख छालाका समस्याहरुमा पर्दछन । डन्डीफोर र कालोपोतोले मानिसको आत्मबिश्वास समेत घटाउछ । अनेकौ औषधी बजारमा डन्डीफोर र कालोपोतो हटाउनको लागि आएको हुन्छ । जथभावी त्यस्ता औषधी प्रयोग गर्दा समस्या बढ्ने खतरा हुन्छ । अनुहारमा चायाँ पोतो आएर हैरान भए यसलाई पूर्ण रुपमा हटाउने घरेलु […]
१७ बैशाख २०७५, सोमबार १६:०७ April 30, 2018
LeaveaComment on डन्डीफोर र कालोपोतोले हैरान हुनुहुन्छ ? अब घरमै बसेर यसरी हटाउनुहोस, यस्ता छन डाक्टर बस्नेतका सुझाव (भिडियो )
अनुहारमा देखिने प्रमुख छालाका समस्याहरुमा डन्डीफोर र कालोपोतो पर्दछन । डन्डीफोर र कालोपोतोले अनुहारलाई कुरुप मात्र बनाउदैन, मानिसको आत्मबिश्वास समेत घटाउछ । बजारमा डन्डीफोर र कालोपोतो हटाउने भन्दै अनेल खाले औषधी पनि पाइन्छन । छालाको ठोस समस्या नबुझी त्यस्ता औषधी प्रयोग गर्दा समस्या घट्नुको सट्टा झन बढ्ने खतरा हुन्छ । तसर्थ डन्डीफोर र कालोपोतोको समाधानका […]
१७ बैशाख २०७५, सोमबार १६:०३ April 30, 2018
LeaveaComment on सौन्दर्यका लागि काँक्रोको प्रयोग विधि पढ्नुहोस !!
गर्मी मौसममा सौन्दर्यलाई बचाइराख्नु चुनौतीपूर्ण विषय हो । चर्को घामले छाला डढाउनेदेखि धुवाँ–धुलोले दिक्क बनाउनेसम्मका समस्या सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो मौसममा आफ्नो सौन्दर्य बचाइराख्न विभिन्न क्रिमको प्रयोग गरिन्छ । यद्यपि, काँक्राको प्रयोगले पनि सौन्दर्यलाई कायम राख्न सकिन्छ । यस्तो छ काँक्राको प्रयोग विधि : डार्क सर्कल आँखाले पनि हाम्रो अनुहारको सौन्दर्यमा गहिरो भूमिका खेल्छ […]
१७ बैशाख २०७५, सोमबार १५:५६ April 30, 2018
LeaveaComment on झुल टाङ्ने र धुप बालेर लामखुट्टे हटाऊने झण्जटबाट मुक्त हुन अपनाऊनुहोस् अति नै सजिलो घरे उपाय
गर्मी मौषममा लामखुट्टेले दिने पीडा निकै रिस उठ्ने खाल्को हुन्छ । अझ गर्मी क्षेत्रमा बस्नेहरु त लामखुट्टेले टोकेर लाग्ने बिभिन्न रोगको समेत सिकार बन्ने गरेको छ । यसबाट बच्न बिभिन्न उपाय अपनाएर हैरान हुनुहुन्छ भने यो तपाईका लागि सुखद खबर हुन् सक्छ । अब सजिलै लामखुट्टेबाट छुटकारा पाउन सक्नुहुन्छ । केही प्राकृतिक उपायहरु अपनाएर लामखुट्टेलाई […]
१७ बैशाख २०७५, सोमबार १५:३१ April 30, 2018
LeaveaComment on लसुन र मह मिलाएर खानु स्वस्थ्यका लागि अमृत समान, यस्ता छन् फाइदै फाइदा
लसुन र मह (हनी)को बारेमा जानकारी नहुने सायदै होलान्। हरेक दिन हाम्रो भान्सामा लसुन मसलाका रूपमा प्रयोग हुन्छ। लसुन मसलामात्रै नभएर यो भान्साको औषधि पनि हो। यसले शरीरका अनेक विकारलाई शुद्धीकरण गरेर अनेक खाले इन्फेक्सन कम गर्नसमेत सहयोग गरिरहेको हुन्छ। लसुनले मानिसको पाचनक्रियालाई समेत फाइदा पुर्‍याइरहेको हुन्छ। बनाउने तरिका दुई, तीनवटा लसुनको पोटी पिसेर पेस्ट […]
१७ बैशाख २०७५, सोमबार १५:२७ April 30, 2018
LeaveaComment on यी लक्षण देखिएमा तपाईलाई पिनास हुन्छ र यसरी १ दिनमै निको पार्न सकिन्छ पिनासलाई
पिनासलाई मेडिकल शब्दावलीमा ‘साईनो साईटोसिस’ भनिन्छ । साईनसमा संक्रमण हुनुलाई हामीले ‘साईनो साईटोसिस’ भन्छौं र त्यसैलाई बोलीचालीको भाषामा पिनास भनिन्छ । हाम्रो टाउकोको खप्परमा चार जोडा हावाका थैला हुन्छन् । त्यसलाई हामीले ‘एयर फिल्ड क्याभिटिज’ भन्छौं । ती थैलाहरूले हाम्रो टाउकोलाई सन्तुलित बनाउने, आवाजलाई स्वरुप दिने काम गरिरहेका हुन्छन् । ती चारवटै थैलाको मुख हाम्रो […]
१७ बैशाख २०७५, सोमबार १३:५३ April 30, 2018
LeaveaComment on शरीरलाई क्यान्सर प्रतिरोधी बनाउन खानुस यस्ता खानेकुरा
१७ बैशाख २०७५, सोमबार १३:३६ April 30, 2018
LeaveaComment on कुन तरकारीले , कस्तो खालको फाइदा गर्छ स्वास्थ्यलाई ?
हरेका प्रकारका तरकारीहरुमा बिभिन्न किसिमका औषधिय गुण पाइन्छन् । मौसमअनुसार तरकारीलाई सन्तुलन मात्रामा खान सकेमा रोगको सम्भावना निकै कम हुन्छ । गाढा पहेलो र हरिया तरकारीमा प्रशस्त मात्रामा क्यारोटिन पाइन्छ । क्यारोटि भिटामिन एको प्रारम्भिक स्वरुप हो । क्यारोटिन शरिर भित्र गएर भिटामिन एमा परिणत हुन्छ । साधारणतया तरकारीमा कार्बोहाइड्रटमध्ये माड र सेलुलोज, खनिज पदार्थमा […]
१७ बैशाख २०७५, सोमबार १३:३३ April 30, 2018
LeaveaComment on गिजाबाट रगत बग्ने समस्याबाट छुट्कारा चाहनुहुन्छ ?
गिजाबाट रगत बग्ने समस्याबाट धेरै मानिस पीडित हुन्छन् । यसो हुनुमा विभिन्न कारण हुन्छन् । दाँत र गिँजाको नियमित सफाइ नगर्नु, मुखमा संक्रमण हुनु, भिटामिन सी को कमी, ल्युकेमिया जस्ता कारणले गिजाबाट रगत बग्नसक्छ । गिजाबाट रगत बग्ने समस्या धेरैलाई सामान्य लाग्न सक्छ। तर यसको परिणाम निकै जटिल समेत हुने भएकाले सचेतता अपनाउनुपर्छ। गिजालाई स्वस्थ […]
१७ बैशाख २०७५, सोमबार १३:२९ April 30, 2018
LeaveaComment on कुन तरकारीमा कुन औषधिय गुण छ ?
हरेक प्रकारका तरकारीहरुमा बिभिन्न किसिमका औषधिय गुण पाइन्छन् । मौसमअनुसार तरकारीलाई सन्तुलन मात्रामा खान सकेमा रोगको सम्भावना निकै कम हुन्छ । गाढा पहेलो र हरिया तरकारीमा प्रशस्त मात्रामा क्यारोटिन पाइन्छ । क्यारोटिन भिटामिन एको प्रारम्भिक स्वरुप हो । क्यारोटिन शरिर भित्र गएर भिटामिन एमा परिणत हुन्छ । साधारणतया तरकारीमा कार्बोहाइड्रटमध्ये माड र सेलुलोज, खनिज पदार्थमा […]